२० वर्षसम्म पनि खुलेन दरबार हत्याकाण्डको रहस्य
June 1, 2021 N88LeaveaComment on २० वर्षसम्म पनि खुलेन दरबार हत्याकाण्डको रहस्य
काठमाडौँ । राजा वीरेन्द्रको वंशनाश गर्ने गरी भएको दरबार हत्याकाण्डको २० वर्ष पूरा भएको छ । तर, २० वर्षको अवधिमा कयौँ सरकार गठन भए पनि राजा वीरेन्द्रको परिवारको समूल नष्ट गर्ने गरी मच्चाइएको हत्याकाण्डको चित्तबुझ्दो कारण अहिलेसम्म पनि जनताले पाएका छैनन् । २०५८ साल जेठ १९ गते शुक्रवार राति राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य, युवराज दीपेन्द्र, […]
दरबार ‘ह’त्या’काण्ड’का प्रत्यक्षदर्शीको बयान : अधिराजकुमारी श्रुतिलाई बचाउन सकिन्थ्यो
June 1, 2021 N88LeaveaComment on दरबार ‘ह’त्या’काण्ड’का प्रत्यक्षदर्शीको बयान : अधिराजकुमारी श्रुतिलाई बचाउन सकिन्थ्यो
सुन्दरप्रताप राना स्वचालित हतियार नियन्त्रण गर्न स्वचालित हतियारै चाहिन्थ्यो। तर, गजेन्द्र (दीपेन्द्रका एडिसी)ले अटोमेटिक हतियार ल्याउलान् भनेर पर्खिरहने समय थिएन, म आफ्नो ‘होल्स्टर’मा रहेको पिस्तोल निकाल्दै बिलियर्ड हलतिर दगुरिहालेँ।दगुर्दै जाँदा झ्यालबाट मेरा आँखा हलभित्र सरर्र पुगे, मान्छे पूरै सोत्तर भएर लडेको देखेँ । बिलियर्ड टेबलनजिक वीरेन्द्र सरकारको शरीर समातेर पूर्वअधिराजकुमार धीरेन्द्रका ज्वाइँ डा. राजीव शाही […]
चीनले अनुदानमा दिएको नौ लाख मात्रा खोप कसले प्राप्त गर्नेछन् ?
June 1, 2021 N88LeaveaComment on चीनले अनुदानमा दिएको नौ लाख मात्रा खोप कसले प्राप्त गर्नेछन् ?
बीबीसी । चीनले अनुदानमा नेपाललाई उपलब्ध गराएको १० लाखमध्ये नौ लाख खोपको मात्रा मङ्गलवार काठमाण्डू आइपुग्न लागेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। गत हप्ता राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र चिनियाँ समकक्षी सी जिन्पिङबीच भएको कुराकानीका क्रममा उत्तरी छिमेकीले नेपाललाई थप खोप उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो। यसअघि पनि चीनले नेपाललाई आठ लाख खोपका मात्रा उपलब्ध गराएको थियो। पछिल्लो […]
उज्जल थापाको निधनमा रविन्द्र मिश्रले एक ट्वीटसम्म गरेनन्
June 1, 2021 N88LeaveaComment on उज्जल थापाको निधनमा रविन्द्र मिश्रले एक ट्वीटसम्म गरेनन्
काठमाडौं । विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्र सामाजिक सञ्जालमा असाध्यै सक्रिय मान्छे हुन् । हरेकजसो विषयमा टिप्प्णी लेखिहाल्छन्, नेता उज्वल थापाको निधनमा भने उने ब्यक्तिगत एक ट्वीटसम्म गरेनन् । बरु पार्टीको तर्फबाट निकालिएको एक थान बक्तब्यको लिङ्क यहाँ छ भनेर लिङ्क सेयर गरेका छन् । विवेकशील साझा पार्टीका पूर्वसंयोजक नेताको कोभिडका कारण निधन […]
June 1, 2021 N88LeaveaComment on काठमाडौँ उपत्यकामा थप १० दिन निषेधाज्ञा थप्ने तयारी
काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकामा थप १० दिन निषेधाज्ञा थप्ने तयारी थालिएको छ । मंगलबार अपराह्न बसेको उपत्यकाका ३ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको बैठकले निषेधाज्ञाको अवधि थप्नेबारे छलफल गरेका बताइएको छ । संक्रमण दर घट्दै गएकोले निषेधाज्ञा थपिने तयारी थालिएको बताइएको छ । यद्यपि जीवनयापन सहज बनाउन केही खुकुलो बन्ने बताइएको छ । याे पनि समाचार […]
विवेकशील साझाका पूर्वअध्यक्ष उज्ज्वल थापाको निधन
June 1, 2021 N88LeaveaComment on विवेकशील साझाका पूर्वअध्यक्ष उज्ज्वल थापाको निधन
काठमाडौँ । विवेकशील साझा पार्टीका पूर्व संयोजक उज्ज्वल थापाको निधन भएको छ । थापाको अपरान्ह ४ बजेर २५ मिनेटमा निधन भएको मेडिसिटी अस्पतालले जनाएको छ । भेन्टिलेटरमा उपचाररत थापाको स्वास्थ्य गम्भीर भएपछि उनलाई ‘एक्स्ट्राकोपोरियल मेम्ब्रेन अक्सिजेनसन (एक्मो) प्रविधिबाट उपचार भइरहेको थियो । कोरोना संक्रमित उनको रिपोर्ट नेगेटिभ भएपनि स्वास्थ्य अवस्था भने जटिल बन्दै गएको थियो […]
नेपालकै पहिलो बिजुली बत्ति बलेको घर [ तस्विर ]
June 1, 2021 N88LeaveaComment on नेपालकै पहिलो बिजुली बत्ति बलेको घर [ तस्विर ]
झिँगटीको छानो, सेतो रङले पोतिएको भित्ता, पुरानो शैलीको तीनमुखे आँखीझ्यालले त्यो घर बैंशमा झनै सुन्दर थियो भन्ने आभास दिन्छ । ठाउँठाउँमा प्लास्टर उप्किसके पनि त्यसको सौन्दर्यमा कमी आएको छैन । उभिनका लागि भने टेकोको साथ लिइरहेको छ । ढोकाको ठीक माथि झुन्ड्याइएको खुइलिन लागेको बोर्डमा लेखिएको छ, ‘नेपालमा सबैभन्दा पहिला बत्ती बालिएको घर ।’ ललितपुर […]
रेशम चाैधरी जेलबाट रिहा हुँदै, सरकार र थारुहट थारुवान संघर्ष समितिबीच ६ बुँदे सहमति
June 1, 2021 N88LeaveaComment on रेशम चाैधरी जेलबाट रिहा हुँदै, सरकार र थारुहट थारुवान संघर्ष समितिबीच ६ बुँदे सहमति
काठमाडाैं । सरकार र थारुहट थारुवान संघर्ष समितिबीच ६ बुँदे सहमति भएको छ । सहमतिअनुसार रेशम चौधरी लगायतमाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता लिइने भएको छ । सहमतिअनुसार थरुहट–थारुवान आन्दोलनका क्रममा टीकापुरमा भएको दुःखद् घटनामा आरोपित धनीराम चौधरी, रेशमलाल चौधरी र लक्ष्मण चौधरीलगायतमाथि लगाइएको सम्पूर्ण मुद्दा फिर्ता र रिहाइका लागि संविधान र कानुनसम्मत पहल गर्ने उल्लेख गरिएको […]
नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ बस्ने घरको फोटो सार्बजनिक, यस्तो छ हेर्नुहोस तस्बिर
June 1, 2021 N88LeaveaComment on नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ बस्ने घरको फोटो सार्बजनिक, यस्तो छ हेर्नुहोस तस्बिर
काठमाडौँ । नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ बस्ने घर सार्वजनिक भएको छ । हिमालय टेलिभिजनका कार्यक्रम प्रस्तोता राजेन्द्र बानियाँले विप्लव बस्ने घर सार्वजनिक गरेका हुन् । अन्तर्वार्ता लिनका लागि विप्लव बस्दै आएको कपिलवस्तुस्थित खरको झुपडीमा पुगेका बानियाँले उक्त घर सार्वजनिक गरेका हुन् । विप्लव शहरका ठूला बिल्डिङमा बस्न छोडेर कपिलवस्तुको दुर्गम गाउँको झुपडीमा बसेर राजनीतिक […]
उज्ज्वल थापाको कोरोना नेगेटिभ, कस्ताे छ स्वास्थ्य अवस्था ?
June 1, 2021 N88LeaveaComment on उज्ज्वल थापाको कोरोना नेगेटिभ, कस्ताे छ स्वास्थ्य अवस्था ?
काठमाडाैं । मेडिसिटी अस्पतालमा उपचार गराइरहेका विवेकशील साझा पार्टीका नेता उज्ज्वल थापाको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। रिपोर्ट नेगेटिभ आए पनि भाइरसले शरीरमा दीर्घकालीन क्षति गरेकोले स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार नआएको अस्पतालले जनाएको हो। थापाको एक्स्ट्राकर्पोरियल मेम्ब्रेन अक्सिजेनेसन (इसीएमओ) प्रविधिबाट उपचार भइरहेको छ। यसअघि थापाको ह्याम्स र ग्रान्डी अस्पतालमा उपचार गरिएको थियो। स्वास्थ्यमा सुधार नआएपछि थप […]